राज्यको संयन्त्र कसले चलाइरहेको छ भन्दै कांग्रेसद्धारा संसद अवरोध, भाेली गृहमन्त्रीले जवाफ दिने | My News Nepal
२०७६ बैशाख १२ गते
राज्यको संयन्त्र कसले चलाइरहेको छ भन्दै कांग्रेसद्धारा संसद अवरोध, भाेली गृहमन्त्रीले जवाफ दिने
२०७५ भदौ २८ गते
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेको संसद बैठक सुचारु भएको छ । गृहमन्त्रीले शुक्रबार (भोली) संसदमा जवाफ दिने सरकारको प्रतिबद्धतापछि कांग्रेसले संसदको अवरोध हटाएको हो । कांग्रेसले निर्मला पन्तको हत्या, रोल्पामा तरुण दलका नेताको हत्या र पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा सरकारले अपराधीको संरक्षण गर्न र घटना ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
उनले भने–‘कञ्चनपुरको घटना राज्य संरक्षित अपराधको स्वरुप हो। दिनानुदिन अनुसन्धान टोली परिवर्तन भइरहेका छन्। घटना अनुसन्धान समितिमा संलग्न सरकारका उपसचिब वीरेन्द्र केसीले चालु अनुसन्धान प्रकृया र त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएर राजिनामा दिए।’
‘केसीले मूख्य दुई कुरा उठाएका छन्। निर्मलाको आत्मा र पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भनेका छन्। त्यस्तै आफ्नो ज्यान को खतरा भयो भनेका छन्, कसरी भयो उनलाई खतरा ? जीवन रक्षाका लागि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संस्थाहरुमा जान पर्ने यो अवस्था किन आयो ? नेपाल सरकारकोे उपसचिब जस्ताले समेत सुरक्षित महसुश गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो ? राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था किन आयो ? राज्यको संयन्त्र सरकारले चालाईरहेको छ वा अन्यले ? सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको बैठक चल्न सक्दैन।’ भन्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।
दोस्रो बैठकमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पन्त हत्याको छानविन गर्न समिति बनेको तर, प्रतिवेदन आइनसकेको जानकारी गराएका छन् । उनले सबै घटनाका अभियुक्तलाई उचित समयमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समते बताएका छन् । साथै सम्बन्धीत मन्त्रीहरुले भोलि सदनमा जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कानुनमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि संसद सुरु भएको हो ।
गोपालमानसँग चुनाव लडेको खर्च उठाउँदै मन्त्री अर्याल
ठेकेदारको लापरवाहीले मध्यभोटेकोसी आयोजना समस्यामा
२०७६ बैशाख ११ गते
विप्लवमाथि खनिए प्रचण्ड, जनताजाती र संघीयता विरोधी रहेको आरोप
२०७६ बैशाख १० गते
अख्तियारका आयुक्त बन्न पूर्व आईजीपी र एआईजीबीच भिडन्त
एनसेललाई २५ अर्ब नतिराउन सर्वोच्चमा टेलिकम माफियाको चलखेल
एनबी बैंकमा जग्गा घोटलापछि अर्को काण्ड, सिइओ ढुंगानालाई बाफिया र सर्वोच्चको आदेशले छोएन
राष्ट्रवादको आवरणमा फणिन्द्र नेपालको ठगी धन्दा